Dowlada Imaaraatka oo khilaafka kala dhaxeeya Somalia ku eedeysay dalka Qatar… – Hagaag.com
Dowlada Imaaraatka oo khilaafka kala dhaxeeya Somalia ku eedeysay dalka Qatar…
Dowlada Imaaraatka Carabta ayaa ku eedeesay Dowlada Qatar in ay ka dambeyso khilaafka kala dhaxeeya Dowlada Soomaaliya, waxa ayna Imaaraatka aaminsan yihiin in Qatar gadaal ka riixeyso Khilaafka labada dal.
Wasiiru dowlaha Arrimaha dibadda Dowladda Imaaraatka Carabta Anwar Maxamed Gargaash ayaa sheegay in dowlada Qatar ka dambeyso khilaafka xoogan ee xiligan ka dhax aloosan Soomaaliya iyo Imaaraatka.
Anwar GarGaash ayaa sheegay in khilaafka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaraaatka uusan u qalmin in heerkaasi gaaro waxyeelana u geesto Walaalinimadooda, waxa uuna xusay in Imaaraatka ka go’antahay ilaalinta Midnimada Soomaaliya .
Wasiirka ayaa isweydiiyay ilaa xiliga uu sii socon karo khilaafka Soomaaliya iyo Imaaraatka, waxa uuna xusay in dowlada Qatar ka faa’ideysatay khilaafkan gadaalna ka riixeyso.
Wasiiru dowlaha Arrimaha dibadda Dowladda Imaaraatka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash ayaa mar kale ku celiyay heshiiskii Dekadda Berbera Imaaraatka uu la galay dowlada Federaalka ayna Marqaati ka ahaayeen dowlad goboleedyada.
Dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraatka ayaa xiligan waxaa ka dhex aloosan khilaaf xoogan oo saameyn ku yeeshay xiriirkii soo jireenka ahaa, Imaaraatka ayaana gabi ahaan joojiyay tababaradii iyo taageeradii ay siin jireen ciidanka dowlada.